Madaxweynaha oo mashaariic dhawra kormeeray, xadhiga ka jaray, dhagaxna dhigay | Saxil News Network
Madaxweynaha oo mashaariic dhawra kormeeray, xadhiga ka jaray, dhagaxna dhigay
February 24, 2015 - Written by admin
Berbera (Saxil News.com)-
Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland oo maalintii labaad ku sugan gobolka Saaxil ayaa maanta soo kormeeray goobo muhiima oo ay ka socoto hawlaha horumarinta gobolka, sidoo kalena waxa uu dhagax dhigay dhismaha Wasaaradda Deegaanku ku yeelan doonto gobolka.
Madaxweynuhu waxa uu ugu horayn soo kormeeray dekeda berbera oo ay ka socoto hawl baaxad leh oo sidii caadada u ahayd ay ku balaadhinayaan maalmulka dekedu.
waxaanay noqonaysa markii labaad ee uu madaxweynuhu ka soo qaybgalo balaadhinta dekeda oo sidan oo kale ay hawli uga socoto iyada oo aynu xasuusanahay in maalintan maalinteedii oo ahayd bishii hore 24/01/2015 uu madaxweynuhu ka qaybgalay xaflad aad u balaadhan oo loo qabtay wejigii koowaad ee balaadhinta barxada weyn ee dekeda, nasiib wanaagse uu maanta oo taariikhdu tahay 24/02/2015 kuna beegan maalinta maalinteedii uu kormeer ku soo maro madaxweynuhu.
Madaxweynuhuna waxa uu uga mahadnaqay Maamulka dekeda ee uu hogaaminaayo Maareeye Cali Xoorxoor iyo shaqaalaha ku hawlan shaqan sida fiican ee wadaniyadu ku dheehan tahay ee ay uga qaybqaateen wejigii labaad ee barxadan lagu balaadhinaayo, isaga oo madaxweynuhu ku hambalyeeyey, muwaadiniintaasi sida qiimaha leh ee ay shacbiga u tuseen inay waxqabsan karaan hadii la isu tago.
Mashaariicda Dawlada Hoose iyo dhagax dhiga wasaarada Deegaanka
wadadan oo ahayd markii uu madaxweynuhu dhagaxa dhigay bil ka hore taariikhduna ahayd
24/01/2015 maanta oo ay tahay taariikhdu 24/02/2015 xadhiga laga jaray iyada oo dhamaystiran waa guul muhiima oo u soo hooyatay gobolka saaxil muujinaysana horumarka balaadhan ee ka socda gobolka.
ALLAA MAHED LEH
Links ka Codadka